Ololaha tallaalka cudurka dabaysha oo maanta ka biloowday Puntland – Radio Daljir
Juunyo 17, 2013 11:15 b 0
Garoowe, 17,June 2013-Wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa sheegtay inay suurto gal-tahay ?in feyraska dabeysha uu kusoo fidi karo ?gobolada Puntland hadii aanan sida deg deg ah looga hortagin. Waxayna ?wasaaraddu maanta qabatay munaasabad lagu daah furayay talaalka ka hortaga dabeysha oo ay ka faa?idaysanayaan 250,000 oo caruur ah oo ay da?doodu ka? yartahay 5 sano,caruurtaas ?oo ku nool 4 gobol oo ka mid ah gobolada ?Puntland.
?Wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Puntland Dr Maxamed Xirsi Duclaae ayaa sheegay inay labo jibaarmeen ?tirada dadkii ?laga helay xanuunkaan oo markii ?hore ahaa 12 qof oo ku nool koonfurta Soomaaliya,wasiir ku xigeenku waxaa uu ?intaas ku daray in cudurkaan uu ku fido hawada isagoo ka dhasha saxa xumada ?iyo waxa lamid ah.
?Wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Cali C/laahi Warsame ayaa waalidiinta ?ugu baaqay inay mas?uuliyad ka saarantahay ubadkooda sidii ?sii ay uga? tallaali lahaayeen ?cudurka dabeysha oo la sheegay inuusan lahayn wax daawo ah.
?Madaxweyne ku xigeenka Puntlkand ahna kuismaha madaxweynaha Puntland General Cabdi Samad Cali ?Shirre ayaa si rasmiya ah u daah furay talaalkaan wuxuuna ??labo dhibcood oo talaal ah afka ka siiyay ?wiil yar oo ?goobta la keenay.
?Madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa howl wadeenada caafimaadka ugu baaqay inay si adag ugu dhabar adaygaan sidii ay guri kasta ?ugaarsiin lahaayeen ?talaalkaas.
?Markii ay munsaabada soo gabagowday ayaa mas?uuliyinta ?dowladda Puntland waxay iyaguna qaateen dhibcaha talaalka Waxaana kamid ahaa mas?uuliyada qaatay tallaalka madaxweyne ku xigeenka, Wasiirka caafimaadka, wasiirka cadaalada iyo ?duqa degmada Garowe.